Mas'uuliyiin ku dhowaa Al Bashiir oo laga helay safmarka Coronavirus
Ali Othman Taha, Ahmed Mohamed Haroun, iyo Abdulreheem Mohamed Hussein ayaa xabsi ku jira tan iyo bishii April ee sanadkii 2019-kii.
KHARTUUM, Sudan – Saddex kamid ah mas'uuliyiintii aadka ugu dhowaa hogaamiyihii la riday ee Suudaan, Cumar Xasan Al-Bashiir, ayaa laga helay safmarka Coronavirus, sidda ay wararku sheegayaan.
Xuseen oo soo qabtay xilal kala duwan wuxuu soo noqdey Wasiiradda Difaaca iyo Arrimaha Dibadda. Si lamid ah, gudoomiyaha Khartuum.
Haaruun wuxuu soo noqdey Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda, wasiiru dowlaha arrimaha bini'aadanimadda iyo gudoomiyaha Koonfurta Kordofan oo kamid ah meelaha colaaduhu la dageen ee ka tirsan waddankaas.
Dhamaantooda waxay xubin ka ahaayeen National Congress Party oo uu hogaamiye ka ahaa Al-Bashiir-na jeelka ku jira. Si lamid ah, waa maxkamad-sugeyaal loo haysto musuqmaasuq iyo dambiyo kale.
Intaas waxaa wehlisa, Haaruun iyo Xuseen waxaa baadigoobeysa Maxkamada Dambiyadda Caalamiga ah oo la xiriirineysa xasuuqii Daafuur.
Taha ayaa soo noqdey madaxweyne ku xigeenka Suudaan intii u dhaxeysay 1998-2013, iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaas Carbeed.
Suudaan ayaa laga xaqiijiyey 4,346 oo ah cudurkaan dilaaga ah oo galaaftay nolosha 184. Balse, waxaa ka bogsatay 749, sidda ku xusan warbixintii ugu dambeysay ee kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka Qaranka.
Dadka uu haleelay Covid-19 ee caalamka oo kor-u-dhaafay 10 milyan
Caalamka 28.06.2020. 09:35
Intaas waxaa wehlisa, in ka badan shan milyan oo kale ayaa kasoo bogsaday xanuunka, todobadii bilood ee u dambeysay.
Sirdoonka Jubbaland oo digniin horleh kasoo saarey xirashada Niqaabka
Soomaliya 07.05.2020. 13:00